Harimisa Norovololona no namerina ny hasin’ny Fitsarana eto Madagasikara – La gazette de la grande île du 19 janvier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Harimisa Noro VololonaHarimisa Norovololona no namerina ny hasin'ny Fitsarana eto Madagasikara...
Harimisa Noro VololonaNEXTHOPERANARISON TsilavoSEM Andry RAJOELINA
Harimisa Norovololona no namerina ny hasin’ny Fitsarana eto Madagasikara – La gazette de la grande île du 19 janvier 2019
Misy ny manakiana anay eto amin’ny La Gazette de la Grande ile, ary isan’ny fanamarihana entin’ny olona sasany amin’ity Gazety ity ny hoe “manakiana hatrany an’izay mpitondra nitantana teto ary tena henjam-piteny ny La Gazette de la Grande Ile”.
Eny Tompoko, izay no maha-tsindrilentam-pahefana ny gazety, ary ankoatra izay dia tarigetranay eto ny mametraka ho aro fanina sy ho fanitsiana ny mpitondra mety hihoa-pefy na hibirioka amin’ny lalana tsy tokony halehany.
Ireharehanay mihitsy izany fa tsy henatra akory.
Na izany na tsy izany, miezaka hatrany kosa izahay manasongadina ny zavatra tsara, saingy matetika dia toa tsy tsikaritra ny maro.
Amin’izao governemanta Ntsay Christian izao, ohatra, dia isan’ny hitanay fa mendrika raha asongadina ny fahamatorana vitan’ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana sady minisitry ny Fitsarana, Rtoa Harimisa Norovololona.
Maro ny fianakaviamben’ny fitsarana, na mpitsara na mpiraki-draharahm-pitsarana na mpiaro mpisolovava , na vadin-tany, na ny mpandraharahan’ny fonja, na ny olona manan-draharaha eny amin’ny fitsarana, eny ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena mihitsy, no mahatsikaritra sy mahatsapa fa nanao ezaka ho amin’ny fanarenana ny hasin’ny fitsarana izy. Tsy hoe efa tontosa 100% ny famerenana ny hasin’ny fitsarana amin’izao fotoana fa azo tsapain-tanana kosa ny firosoana mankany amin’izany. Isan’ny hita misongadina amin’izany ny fisorohana ny kolikoly, na amin’ny raharaham-pitsarana na ny fifaninanana handraisana ho mpianatra mpitsara na ny ho mpianatra ho mpiraki-draharaham-pitsarana, sy ny sehatra hafa.
Tsy midika akory izany fa foana ny kolikoly eo amin’ny raharaham-pitsarana, fa hita fototra kosa ny fanombohan’ny fahitana vokatsoa amin’izany.
Dia vantanina ny resaka fa raha misy ny ho fanavaozana ny mpikambana ao amin’ny governemanta dia rariny raha mbola homena fitokisana Rtoa minisitra ankehitriny, Norovololona Harimisa e!
Tsy afenina koa mantsy fa tsy vitsy ny olona no manahy sao sanatria ka hiverina hahazo sehatra eo anivon’ny tontolon’ny raharaham-pitsarana ny efa zatra nanao kolikoly sy be afera hatrizay, ka sanatriavin’ny vava, ho maty momoka ny ezaka ho famongorana ny kolikoly.
Hatramin’ny filofosana hamita ireo antontan-taratasy natory sy tsy nisy nikitika hatrizay ao anivon’ny fitsarana no hita fa ezahina nofohazina tamin’izao fotoana nitantanan-dRtoa Minisitra Norovololona Harimisa izao. Tsy midika koa izany fa efa voakirakira avokoa ireo antontan-taratasy tsy voakitika nandritra ny 20 na 15 taona fa mba efa miezaka ny hanao izay tratra mba hanajana ny zon’olombelona e!
Koa raha misy ny fiheverana ny maha-zava-dehibe ny fampanjakana ny antsoina hoe “tany tan-dalàna” dia aoka mba ny fitsarana no homena ny hasiny voalohany satria io no antoky ny tany tan-dalàna. Tsy ho sarotra ny hahatrarana izany tarigetra izany raha olona mijoro amin’ny maha-izy azy araka ny fenitry ny fitsarana, toa an-dRtoa Norovololona Harimisa no mitarika ny ezaka ho amin’izany, ary ny irian’ny maro dia hiova tsy ho ela hanara-dia ny toe-tsaina ananan’ity minisitra ankehitriny ity ny fianakaviamben’ny fitsarana amin’ny ankapobeny, izay tsorina koa fa maro no efa tratry ny fahalovana amin’ny endriny maro. Mbola marina mandrakariva koa mantsy ilay oha-pitenenana hoe “ny tarehy ratsy no tsy azo ovaina fa ny toetra na fahazaran-dratsy azo ovaina tokoa”.
Previous articleDes gros bonnets sur la sellette – Le Bianco est entrain de finaliser les enquêtes sur les grosses affaires de corruption – Expressmada du 19 janvier 2019
Next articleZava-bitan’i Harimisa Norovolona teo amin’ny tontolon’i Fitsarana tao anatin’ny fito volana – TVM 19 janoary 2019